လကမ္ဘာခရီးစဉ်မှ အပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လကမ္ဘာခရီးစဉ်မှ အပြန်
Posted by moonpoem on Jun 17, 2014 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 13 comments
လကမ္ဘာသို့ သွားရန် မွန်းပိုအမ်တို့ သူငယ်ချင်းများ ကြိုးစားပြီး ငွေရှာနေကြသည်။မိဘများ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင် လည်းကောင်း၊ ဦးလေးများ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်လည်းကောင်း ကြိုးစားပမ်းစား
ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်ပြီး အိမ်တိုင်းတွင် အပေါဆုံးက ပိုက်ဆံဖြစ်လေရာ တစ်ပတ်အတွင်းတွင်ပင်
လကမ္ဘာသွားရန် ငွေပြည့်ပြီ ဖြစ်လေသည်။
လကမ္ဘာတွင် နေထိုင်စဉ် လိုအပ်မည့် ပစ္စည်းတစ်ခုသာ ယူခွင့်ပြုလေရာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က နေ့ တိုင်း ဖေ့ဘွတ်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ရန် လေထဲတွင်ဝဲပျံနိုင်သည့် ကင်မရာ၊ နောက်တစ်ယောက်က လကမ္ဘာရှိ ဂြိုလ်အစားအစာများကို မကြိုက်ပါက အစာပြေစားနိုင်ရန် ပဲကြီးလှော်နှင့် မွန်းပိုအမ်က နေ့ တိုင်း စာရေးနိုင်ရန် ဒေါ်လာ၁.၅ဘီလီယံတန်ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းကို ယူသွားကြမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။
လကမ္ဘာသွားမည့် သတင်းကို သိကြသည့် သူငယ်ချင်းများကလည်း ရေချိုးချိန် ချေးတွန်းရန် ကျောက်ခဲကောက်ခိုင်းသူများ၊ ကျွန်ုပ်အစ်မ အပါအ၀င်၊သူငယ်ချင်းအပျိုကြီးများ ကလည်း လကမ္ဘာရှိ ဂြိုလ်သူငယ်လူပျိုများကို ခေါ်လာရန် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးမှာကြသည်။
မွန်းပိုအမ်တို့ သွားမည့်အကြောင်းကိုလည်း မီဒီယာများက မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒုတိယမြောက် လကမ္ဘာသွားမည့် အုပ်စုဟူရ်ျ အကောင်းရေးသူများရှိသလို၊ အားအားယားယား လေထဲလမ်းသလားသူများ စသဖြင့် အဆိုးရေးသူများလည်း ရှိကြသည်။ အခြားနိုင်ငံများမှ လကမ္ဘာသို့ သွားရန် ပြင်ဆင်ချိန်သည် တစ်လခန့် ကြာမြင့်သော်လည်း မြန်မာပြည်မှ မွန်းပိုအမ်တို့ သည် ပြင်ဆင်ရန်မလိုဘဲ သွားမိန့် ကျသဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြပြန်သည်။
အကြောင်းမှာ ပထမဆုံး ပြင်ဆင်ရသော လကမ္ဘာဧ။် အမှောင်အတိုင်းနေရသော ကျင့်စဉ်တွင် အခြားနိုင်ငံများတွင် အမှောင်အတွက် နေသားကျနိုင်ရန် အမျိုးမျိုး ပြင်ဆင်နေချိန်တွင်
မွန်းပိုအမ်တို့ သည်နေ့ ခင်းတွင်ဖြစ်ဖြစ် ညတွင်ဖြစ်ဖြစ် မီးပျက်သည့်အတိုင်း နေနေကြသည်ကာ များလေရာ ထိုအတွက် ပြင်ဆင်ရန်မလိုအပ်တော့။ နိုင်ငံတော်ဧ။် စေတနာများကို ကျေးဇူးတင်ရသည်။
ဒုတိယမြောက် ပြင်ဆင်ရသော လကမ္ဘာဧ။် လမ်းမများအတိုင်း ကြမ်းတမ်းစွာ လမ်းလျှောက်ရသော
ကျင့်စဉ်တွင်လည်း အခြားနိုင်ငံများတွင် လမ်းကြမ်းများအတွက် နေသားကျနိုင်ရန် အမျိုးမျိုး ပြင်ဆင်ချိန်တွင် မွန်းပိုအမ်တို့ သည် တောင်ဥက္ကလာ၊တောင်ဒဂုံတို့ တွင် ယခုကဲ့သို့ မိုးရာသီအခါ လမ်းလျှောက်သွားသည့်အခါ လကမ္ဘာထက်ပင် ပိုဆိုးသဖြင့် ထိုကျင့်စဉ်အတွက်လည်း ပြင်ဆင်ရန်မလိုအပ်တော့။ နိုင်ငံတော်ဧ။် ကရုဏာများကို ကျေးဇူးတင်ရသည်။
ထိုကဲ့သို့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြီးနောက် လကမ္ဘာသွားမည့် နေ့ သို့ ရောက်လာပြီ။
မွန်းပိုအမ်တို့ အုပ်စု ၀တ်စုံအပြည့်ဖြင့် ပြင်ဆင်ပြီး SKAW NET မှ လည်း LIVE လွှင့်နေရာ ရင်သပ်ရှူမောဖွယ်ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးက စောင့်ကြည်နေကြဧ။်။
ထို့ နောက် ဦးထွန်းလွင်ဧ။် မိုးလေ၀သဌာနချုပ်မှတဆင့် တင်လွှတ်မည် ဖြစ်သဖြင့် မွန်းပိုအမ်တို့ 
ရုံးချုပ်သို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ မသွားခင်လကမ္ဘာသွားမည့် သူများဧ။် ရင်ခုန်သံများကို အင်တာဗျူးကြသည်။ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
နောက်ဆုံးကျမှ အာကာသယာဉ်ပေါ်သို တင်လွှတ်လိုက်ကြသည်။ရင်တွေ
တဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေသည်။ကမ္ဘာကြီးကို ကျော်ပြီး တခြားအာကာသကို လှမ်းမြင်နေရပြီ။ဟေးးးးး အောင်မြင်သွားပြီ။ မွန်းပိုအမ်တို့ လေထဲတွင် လွတ်နေကြပြီ။လွတ်နေသည်။ပေါ့နေသည်။ဘာမှ မမြင်ရတော့…။ဘာမှလည်း မသိတော့တော့တော့။
၀ုန်း…….မရတော့ဘူးဟေ့ ဆင်းကြဟေ့ ဆင်းကြဟ။ရေတွေကြီးနေတယ်ဟ။အလို လကမ္ဘာထဲတွင် ရေကြီးနေသည်ဆိုသော အသံများကြားနေရပါလား။ဘာသံပါလိမ့်ဟု နားစွင့်လိုက်ချိန်တွင်
ဟဲ့ကောင်မလေး ဟဲ့ကောင်မလေး သြော်..ဂျာနယ်ကြီးဖတ်နေပြီး ဘေးဘီတောင် မသိတော့ဘူး။ဟိုမှာငါတို့ စီးလာတဲ့ကား ရေ၀င်ပြီးမောင်းမရတော့လို့ နောက်ကားပြောင်းစီးခိုင်းနေတယ် ညည်းက ပြောင်းမစီးဘူးလားဟု ဘေးနားက ပြောသံကြားရလိုက်သည်။မော့ကြည့်လိုက်တော့မှ အာကာသယာဉ်တစ်ဖြစ်လည်း ၄၃လိုင်းကားပေါ်ရောက်နေပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေသော ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ် သတိထားမိသွားသည်။
ထိုအခါမှ မွန်းပိုအမ်လည်း လိုင်းကားပေါ်မှ ဒရောသောပါး ပြေးဆင်းပြီး ဗဟန်း၃လမ်းမှတ်တိုင်ရှိ
ပေါင်လယ်ထိရောက်နေသောရေများကို လကမ္ဘာခရီးစဉ်အတွက် ကြိုပြင်သည်ဟု သဘောထားကာ ဖြတ်ကျော်ပြီး နောက်လိုင်းကား ပြောင်းစီးရန် ပြင်ဆင်လိုက်သည်။
လက်ထဲတွင်တော့ ချမ်းမီမီကိုတို့လကမ္ဘာသွားမည့် အကြောင်း ရေးထားသည့် ဂျာနယ်ကြီးကို
ကျုပ် အသက်အရွယ်လေးရလာတော့ အတည်တကျဘာ အလုပ်လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတာ တစ်လကျော်လောက်ရှိပြီ အဖြေမရတာ အခုမွန်းပိုအမ်ပိုစ့်ဖတ်ပြီမှ အဖြေရပြီ မန်းမှာ အဆောက်အဦးကောင်းကောင်း ဌားပြီ ဟိုတယ်ဖွင့်မယ် ဟိုတယ်အမည်က လကမ္ဘာ တဲ့ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ဟန်နီးမွန်းကို လကမ္ဘာသွားမယ်လို့သာ ကြေငြာပြီး ကျုပ်ဟိုတယ်တာလာကြဗျာ ကံစမ်းပါပေးလိုက်အုံးမယ် ဘယ်လိုလဲ စိတ်ဝင်စားသူများ ရှယ်ယာပါကြစေ။
သတင်းတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ လကမ္ဘာသွားမယ့် ဒုတိယအုပ်စုလို့ရေးပြီး ပထမဆုံး ရောက်သွာသူလို့အောင် သတင်းထူးထပ်ရေးလို့ရသေးတယ်။
ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ လကမ္ဘာသွားဖို့ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ပြီးသား နောက်ထပ်တစ်ခုက ကိုပေါက်ရဲ့” ရွှေအိုရောင်ဒုက္ခများ” http://myanmargazette.net/198986 မှာ ရှိသေးတယ်။
ဒီပို့စ်ကို ဖဘမှာ တွေ့ကတည်းက အရမ်းသဘောကျနေတာ….။
လကဗျာ လကမ္ဘာသွားရင် ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးပေါ်က ဖြတ်သွားရမှာဆိုတော့ ဂိတ်ကြေးတောင်းရမယ်..(ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်)
ရီသောသူ အသက်ရှည်၏ တဲ့..။ လကဗျာက ပျော်တတ်ပုံရတယ်…
နိုင်ငံတော်ဧ။် စေတနာ၊ ဂရုဏာတွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ ကလေး ကြီးပွားဦးမယ်…
ဒါနဲ့လေ…မြောက်ဥက္ကလာမှာ လကမ္ဘာ ဆိုတဲ့ အထူးကုသားဖွားဆေးရုံရှိသတဲ့
ဂြိုလ် သူငယ် တစ်ယောက်လောက် မှာမလို့ဟာကိုကွာ။
​ဆရာ​သော်​​တာ​ဆွေနဲ့ ​ရေးပုံနဲနဲ ဆင်​တယ်​ ဖတ်​ဖူးလား ။ စာ​ရေး ဆရာ​/မ နာမယ်​​တွေ ထည့်​ပြီး​ရေးထားတာ​လေ ။ စိတ်​ဆိုးတဲ့သူ​တွေကလဲဆိုးလို့ ။ လွမ်းစရာ ……….
လကဗျာ က လကမ္ဘာသွားမယ်ဆိုလို့ 
ဓာတ်ပုံအတူတွဲရိုက် ထားဦးမှဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ 
ဝမ်းသာအားရနဲ့ ပြေးဝင် လာတာ အထုဒေါ့ အိမ်မက်
ဂျီးပေါ့ ဟင့် လူဇိုးးးးးးး
လကမ္ဘာ ထဲမှာ အီအီးဘယ်လို ပါရသလဲဟင်င်င်။
ဟာဂျာ…………..မသေခင်လေး လကမ္ဘာကိုသွားဖူးချင်တယ်လို့တွေးနေတုန်း အနော့အိပ်မက်ကို သူတို့ဦးတွားဒယ်………………. :byee:
လကမ္ဘာပေါ်မှာ စာရေးရင် လက်တော့တို့
ဖုန်းတို့နဲ့ပဲ ရမယ် မမလကဗျာ